ခြေစွယ်ငုတ်ခြင်း မဖြစ်ရလေအောင် ~ (IT) ကိုထိုက်
3:13 AM ကျန်းမာရေး No comments
ခြေသည်းညှပ်စဉ်ကျန်ခဲ့သောခြေသည်းစွယ်ကအသားထဲတိုးဝင်ရာကခြေစွယ်ဝန်းကျင်တွင်၊ရောင်လာတတ်သည်။တစ်ခါတစ်ရံပြည်တည်လိုက်လာသည်။ခြေသည်းညှပ်ရာတွင်ခြေစွယ်ကျန်ခြင်းနှင့်၊ရှုးဖိနပ်ကျပ်ကျပ်စီးသည့်အခါ၊ခြေချောင်းဖျားများစုညှစ်ခံထားရခြင်းတို.မှာခြေစွယ်ငုပ်စေသောအရင်းခံအကြောင်းများဖြစ်ကြပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့်အရင်ပြရန် -ခြေစွယ်ပိုးဝင်၊ရောင်ရမ်းနေလျှင်ထိုသို.ဝေဒနာရနေသူတွင် ဆီးချို၊သွေးကြော ကျဉ်းရောဂါစသည်တို.ရှိလျှင်။
နာနေ၊ရောင်စပြုနေသောပလာစတာကပ်ထားပါ။ ၂။ခြေညှပ်ဖိနပ်၊ကွင်းထိုးဖိနပ်စီးပါ။ ၃။ခြေစွယ်ငုပ်နာလုံးဝပျောက်မှခြေသည်းညှပ်ပါ။ ၄။ခြေသည်းဆိုးခြင်း၊ခြေသည်းဆိုးဆေးချွတ်ခြင်းတို.ကိုခြေစွပ်ငုပ်နေစဉ်မပြုလုပ်ရ။ ကာကွယ်ခြင်း အကောင်းဆုံးကာကွယ်နည်းမှာခြေထောက်ကိုဂရုစိုက်နည်းသာဖြစ်ပါသည်။ -နေ.စဉ်ခြေဆေးပါ။ခြေဆေးပြီးနောက်ရေစင်အောင်သုတ်၊ရေခြောက်အောင်ထားပါ။ -ရှေ.ဘက်တွင်ခြေချောင်းလေးများကိုစုညှစ်ထားတတ်သည့်ဖိနပ်၊ဦးချွတ်၊ဒေါက်မြင့်၊ဖိနပ်စသည်တို.မစီးသင့်။ -ချည်ထည်ခြေစွပ်၊စကော့ကင်များကိုသာဝတ်ပါ။နေ.စဉ်လဲပါ။ခြေဦးပိုင်းဖွင့်ထားသောခြေစွပ်၊
စကော့ကင်များဝယ်၍ရသည်။ယင်းအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပါ။ -ခြေသည်းညှပ်လျှင်အသေအချာညှပ်ပါ။ ခြေသည်းညှပ်နည်း (၁)ခြေသည်းမညှပ်မီခြေသည်းနူး၊ပျော့သွားစေရန်ရေနွေးဇလုံထဲတွင်ဆယ်မိနစ်ခန်.စိမ်ထားပါ။ (၂)တုံးသောခြေသည်းညှပ်၊ဓား၊ကပ်ကြေးတို.မသုံးသင့်။တစ်ခါညှပ်လျှင်တစ်ချက်တည်းပြတ်မည့်ခြေ
credit to Wellness Health & Beauty Magazine
လူသားတို့တီထွင်ထားသော ရေဒါ၊ ဆိုနာ များထက် ခေတ်ရှေ့...
လေထုအတွင်းရှိ အောက်စီဂျင် ပမာဏ ဟန်ချက်
ဗိသုကာ ပညာရှင်များ (သို့) သက်ရှိများ အသက်ရှင်ရေးအတ...
မွေးရာပါ သိစိတ်စွမ်းရည် နဲ့ အဆိပ်ဖြေဆေးသိတဲ့ ကြက်ေ...
ကွန်ပြူတာအသစ်တလုံးအတွင်းသို့ MICROSOFT OFFICE PROF...
ကွန်ပျူတာတွင် ကပ်ထားရုံဖြင့် ဖိုင်များကို ရွှေ့ပြော...
ပျောက်ဆုံးလေယာဉ် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းမှာ တွေ့ရ...
အနှိပ်ခံခြင်းကြောင့် သက်သာလျော့ ပါးနိုင်သော ရောဂါေ...
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း Facebook သုံးစွဲသူ ၁ ဒသမ ၄ သန်...
သင်္ကြန်သီချင်း 29 ပုဒ် ပါဝင်သည့် APK ( Android Appl...
Firmware ဆိုတာ (What is Firmware ?)
Film Rating အကြောင်း
သော့ခတ်မယ် မြန်မာမှုပြုထားပါသည် (app တွေ lock ချဖို...
GSM / WCDMA / CDMA တို့ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မူမျာ...
Huawei ဟန်းဆက်ကုမ္ပဏီသည် စပိန်နိုင်ငံ ဘာစီလိုနာမြို...
Wifi Hack နိုင်မည့် WIBR plus pro APK
ကားပြိုင်မောင်းတာ ၀ါသနာပါသူများတွက် Hack ထားပြီးသာ...
Android Games GPK ဖိုင်များ Install လုပ်နည်း
DriverPack Solution 2013 Full Version (x86&64 bit)...
Windows တွင် MAC Address အားပြောင်းလဲပြီး WiFi အသံ...
Android Phone မှတစ်ဆင့် ထီပေါက်စဉ် တိုက်နိုင်မည့် ...
Sexy Tube V 1.4 Android Application ( 18 + Only )
စက်ရုပ်အက်ရှင်ဂိမ်း - RoboCop™ v2.0.1 [Money Mod] ...
Myanmar IT Knowledge ရဲ့ APK